Ikhaya IZITOLO EZIZWELONKE ZOKWENZA IFOOTBALL Abadlali bebhola lebhola lesiNgisi I-Callum Hudson-Odoi Indaba Yobuntwana Kanye ne-Untold Biography Facts
I-LB ibonisa iNdaba ephelele ye-Football Whiz Kid eyaziwa kakhulu ngegama "Callum". I-Callum yethu ye-Callum Hudson-Odoi Childhood Indaba kanye ne-Untold Biography Facts ikulethela i-akhawunti ephelele yezenzakalo eziphawulekayo kusukela ngesikhathi sakhe sokuzalwa kuze kube yimanje. Ukuhlaziywa kuhilela ukuphila kwakhe kwasekuqaleni, imvelaphi yomndeni, indaba yokuphila ngaphambi kokudumo, ukuphakama kwendaba yegama, ubuhlobo bomshado, impilo yomndeni, impilo yomuntu kanye namaqiniso angamanga.
Yebo, wonke umuntu uyazi ukuthi ufaniswa I-Eden Hazard ngenxa yezinga lakhe lokuqhuma nokukhohlisa. Kodwa-ke, bambalwa kuphela abheka i-Biography ye-Callum Hudson-Odoi enomdla kakhulu. Manje ngaphandle kokuqhubeka kwe-ado, ake siqale.
I-Callum Hudson-Odoi Indaba Yobuntwana Plus Untold Biography Facts- Imvelaphi Yokuphila Nokuqala Komndeni
Ukuqala, igama lakhe eligcwele liyi Callum James Hudson-Odoi. I-Callum yazalwa ngo-7th November 2000 kubazali bakhe uMnu noMnu. Bismark Odoi eLondon Borough of Wandsworth, e-United Kingdom. Wazalwa njengendodana yesibili yabafana abathathu kubazali bakhe abathandekayo aboniswe ngezansi.
Umndeni wakwaFeleum u-Hudson-Odoi unezimpande zikaGhani futhi ukuzalwa kwakhe e-UK kwavela ngenxa yesinqumo sabazali bakhe sokubeletha indodana yabo yesibili kwelinye izwe. Isibongo sakhe "Odoi " is igama kubantu abacishe babe ngama-23,278 eGhana, eNtshonalanga Afrika (Imibiko ye-ForeBear).
U-Hudson-Odoi wakhulela umfowethu omkhulu uBradley Hudson-Odoi oneminyaka engu-12 ephezulu e-London Borough yaseWandsworth. Futhi, umfowabo omncane ogama lakhe aliziwa.
Ngokwalokho esikushoyo, akucaci ukuthi ngabe umfowabo omdala waseHudson-Odoi wanikezwa umama wakhe ecabangela ukuthi usemncane kakhulu njengoba ebona isithombe sakhe ngenhla. Kodwa-ke, ukuqala kwabo bonke abazalwane bathandana nokudlala ibhola ngenxa yobaba babo uBismark Odoi owanikezela izingane zakhe isisekelo soccer soccer.
UBismark Odoi ungumdlali waseGhanaya owadlala i-Hearts of Oak, iqembu lezemidlalo e-Accra, eGhana. Ukuzimisela kuka-Callum kwebhola ngokuqinisekile kuhlawulela izabelo ngoba kwaqala ukuhlolwa okuphumelelayo nokubhaliswa kwentsha neBlues yaseLondon.
I-Callum Hudson-Odoi Indaba Yobuntwana Plus Untold Biography Facts- Umsebenzi Wokuqala
U-Hudson-Odoi wajoyina i-Chelsea youth academy ngonyaka ka-2000 eneminyaka engu-7. Njengoba ekhula eminyakeni yakhe esemusha, u-Hudson-Odoi akenzanga lutho ngaphandle kokuqapha amakhono ebhola ayekholelwa ukuthi kungenye yezinto ezidingekayo zesimanje samanje. Buka isampula yamakhono akhe okuqala ngezansi;
Ukufundisa ama-football tricks kwamenza waba into engavamile kule ndawo. U-Hudson-Odoi wasebenzisa iminyaka yakhe enhle ne-Chelsea osemusha hhayi nje ngokuba ngumdlali wezemfundo, kodwa u-freestyler owadingeka asebenze kanzima nokubekezela ukuze ahambe kahle ngisho nasezimweni ezithintekayo njengoba kuboniswe ngezansi;
Uthi bewazi?... Ukuqhuma okuqhubekayo kwebhola kwaholela ekwenzeni ikhono lokulawula ibhola likaHudson-Odoi kanye nesivinini esilandelayo semilenze yakhe ekugcineni esichaza indlela yakhe yokudlala.
Ekhuluma ngokugqugquzela ngokulingana kwakhe, u-Hudson-Odio uke wangena kwi-Q & A yakamuva eyakhula, izithombe zakhe ziyiqembu-abalingani, I-Eden Hazard futhi Willian (Umbiko we-DailyMail Report).
I-Callum Hudson-Odoi Indaba Yobuntwana Plus Untold Biography Facts- Umgwaqo oDumela
I-Taste of Success- Intsha Yokuqothula:
Ngenkathi eseneminyaka engaphezu kwezinyanga ezintathu enehloni lokuguqula i-18, i-Hudson-Odoi ayengaziwa ukuthi kuqoqwe i-silverware. Ijubane lemilenze yakhe lihlehlise izabelo njengoba edlala indima ebalulekile ekuphumeleleni kwe-Chelsea's academy. Uthi bewazi?… I-Hudson-Odoi idlala indima enkulu eqenjini lakhe iphakamisa i-FA Youth Cups ne-Under-18 Premier League isihloko.
Ukwengeza Okukhulu Kuqoqo LamaMede:
Ukwengeza kumqoqo wakhe wezindondo, u-Hudson-Odoi naye uyingxenye yeqembu le-Under-17 2017 World Cup laseNgilandi eliphumelele i-World Cup trophy. Wabeka izinsizi ezimbili ekupheleni komdlalo okwakuboniswa yiNgilandi kusuka emigomo emibili ukuya phansi eSpain 5-2.
I-Callum Hudson-Odoi Indaba Yobuntwana Plus Untold Biography Facts- Ukuphakama Ekudumeni
Imisebenzi ye-2018 / 2019 yangaphambi konyaka ye-Hudson-Odoi ayizange imangaze kuphela kubabukeli abavamile kodwa ikakhulukazi kubalingani beqembu lakhe lase-Chelsea futhi abasanda kuqokwa UMaurizio Sarri. Ukusebenza kwakhe ngaleyo nkathi kwaphawula ukuguquka emsebenzini wakhe. Buka ividiyo ngezansi.
U-Hudson-Odoi ngemuva kwesiboniso sakhe se-2018 / 2019 preseason wabona ukuthi uqala ukusebenzelana eduze Sarri owamqinisekisa ngokuthi useyilungu lokuqala le-Chelsea emkhankasweni wakhe ozayo.
Ngokushesha nje lapho isithembiso se-2018 / 2019 sokufakwa kweqembu lokuqala siqala ukungabaza, ama-scouts ase-Europe amakilabhu afana neBayern Munich ne-Real Madrid athola ithuba lapho beqala ukushaya umdlali. Lokhu kwenziwa Sarri bhakamisa ngesithembiso sakhe. Ngasekupheleni kwe-2018, ubudlelwane babo baqala ukuqhuma futhi no-Hudson-Odoi aphinde ahambise umphathi wakhe.
Njengesikhathi sokubhala, inkontileka entsha ibe setafuleni i-Hudson-Odoi. Bonke abanye, njengoba bekusho, ngumlando.
I-Callum Hudson-Odoi Indaba Yobuntwana Plus Untold Biography Facts- Ukuphila Ubudlelwano
Nakuba kungenzeka ukuthi usemncane, kodwa u-Callum Hudson-Odoi ngumuntu onothando lwakhe olubalekela ukuhlolisiswa kweso lomphakathi ngenxa nje yokuthi impilo yakhe yothando iyimfihlo noma mhlawumbe ayikho okwamanje.
I-Callum Hudson-Odoi Indaba Yobuntwana Plus Untold Biography Facts- Ukuphila Personal
Ukukwazi impilo yomuntu we-Callum Hudson-Odoi kuzokusiza ukuthi uthole isithombe esiphelele kuye. Ngezinye izikhathi nje nje ukuba yiqhawe emgodini akwanele ku-Hudson-Odoi njengoba ayeke wazama ukunikela ngesiqephu somculi.
Encwadini eyengeziwe, i-Hudson-Odoi ingumuntu onomthombo futhi onesibindi. Uzimisele kakhulu futhi unqume futhi uthanda ukuqhubeka eqhubekela phambili kuze kube yilapho esebenza kahle kakhulu emsebenzini wakhe.
I-Callum Hudson-Odoi Indaba Yobuntwana Plus Untold Biography Facts- Ukuphila Komndeni
Njengesikhathi sokubhala, i-Hudson-Odoi yamuva kumndeni wakhe waseGhana ukuphuma endaweni yesehlakalo. Okokuqala, kwakungokuphathelene nobaba wakhe nomfowabo bebephethe phezulu isikhundla sokuthandwa. Njengamanje, kusobala ukuthi i-Hudson-Odoi isivele ilungu elimenyezelwe kakhulu lomndeni wakhe.
Mayelana noMfokazi wakhe Omdala:
UBradley, ngokungafani nomfowabo omncane, wayenomsebenzi okhungathekile lapho ebizwa ngokuthi u-Callum. Lesi yisikhathi lapho ehluleka ukuhlala e-Premier League.
Wasayinwa esikoleni kuFulham kodwa akazange akwenze eqenjini labo lokuqala eC Craven Cottage. Lo mdlali ushiye ukudlala eqenjini likaNdunankulu futhi wanquma ukuxazulula ibhola elingenayo ilungu.
I-Callum Hudson-Odoi Indaba Yobuntwana Plus Untold Biography Facts- Amaqiniso angaziwa
Ummeli ophezulu we-Ghanian:
UMichael Essien, owayengumdlali we-Chelsea FC ne-Ghana emhlabeni wonke owina iziqu ezimbili ze-Premier League ne-Champions League ngesikhathi eseStamford Bridge, ungumdlali omkhulu weFreeum Hudson-Odoi. U-Essien wake wangena ku-Instagram elandela ukunqoba kwe-Under-17 World Cup yase-Hudson-Odoi eNgilandi ukuze afisa ukumncoma njengoba embiza "Umncane".
Lokhu kuphakamisa imibuzo ngokuthi uMichael Essien uhlobene yini noFeleum Hudson-Odio.
I-dop yaseBrithani-Ghanian ngesikhathi ingane iphula i-9 ngonyaka we-European irekhodi njengoba ivule umgomo we-Chelsea FC ngokumelene ne-PAOK esigabeni seqembu le-2018 / 2019 UEFA Europa League.
I-Callum i-Hudson-Odoi ibeke ubhuloho ngokuba yintsha encane kunazo zonke (iminyaka engu-18 nezinsuku ezingu-22 ubudala) ukushaya amaphuzu emncintiswaneni.
U-Willian Kanye Wanikezwa ukuba abe nguMmeli wakhe:
Njengoba isitoreji seFumumum Hudson-Odoi saqhubeka sinyuka, umlingani wakhe we-Chelsea, uWillian, wanquma ukungena emcimbini ngokucela ukuba abe yi-agent yakhe (I-Daily Mail Kanye Kubikiwe). Isinqumo esishaqisayo senziwa ngenxa yeBrazil ekuboneni ikusasa kumfana eba ngumdlali ohamba phambili futhi obiza kakhulu emhlabeni wonke ngelinye ilanga.
QAPHELA QAPHELA: Siyabonga ngokufunda i-Callum Hudson-Odoi Indaba Yobuntwana ne-Untold Biography Facts. Kuzo LifeBogger, silwela ukunemba nokulingana. Uma uthola into engabonakali kahle, sicela wabelane nathi ngokuphawula ngezansi. Sizohlala sibazisa futhi sihlonipha imibono yakho.